“ख्रीष्टियन” नाम जोडिएको त् छ, तर त्यहाँ ख्रीष्ट चाँहि हुनुहुन्न l | Nepali Christians
“ख्रीष्टियन” नाम जोडिएको त् छ, तर त्यहाँ ख्रीष्ट चाँहि हुनुहुन्न l
October 6, 2015 7:58 am by: Admin Category: Articles A+ / A-
फेसबुकमा लेख्ने गरेका लेखाईहरूलाई अक्षरमा मात्र सिमित हुन नदिनका निम्ति मैले सक्दो प्रयास गर्दैछु । धरैपटक आफैलाई अभ्यासमा दौडाएको छु । यसकारण कहिले सुसमाचार लिएर त कहिले विश्वासी परिवारसँग संगती गर्नका निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा पुगें । परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा यो डेढवर्षको अवधिमा झण्डै १७ जिल्लामा पुग्ने मौका पाएँ । कतिपय जिल्लाहरूमा धेरैचोटी दोहोर्याएर गएँ ।
धेरै ठाउँमा लक्ष्य र उद्देश्यहरू बिचल्लीमा परेको देखें । तिनीहरूका लक्ष्य र उद्देश्य; जसले काठमाडौंमा बसेर विदेशी दाताहरूलाई सुनाएका थिए । यसैको निम्ति बिदेशी चर्चका भेटी र सहयोग नेपाल भित्र्याएका थिए ।
तर विडम्बना गाउँका मण्डलीहरू एउटा मादलको निम्ति वर्षभरी योजना बनाउँदा रहेछन् । झ्याली र नयाँ भजनहरूको भाकालाई सुनेर आनन्द मनाउँदा रहेछन् । यहाँ काठमाडौंमा एउटा मादल आउने पैसाले दर्शन बनाउनेहरू खाजा खान्छन् । उता त्यति रकम जुटेमा मादल किन्छु भनेर विश्वासीहरू उपवास बस्छन् । राजाधानीमा बस्ने कतिपय साना प्रभुहरूको सेवकाईमा पारदर्शीता छैन रहेछ । इमान्दारिता छैन रहेछ । बिकट गाउँमा छोरी मण्डली (झुण्ड) खोलेर स्थानीय सेवकलाई महिनाको तीनहजार दिएर उनीहरू काठमाडौंमा बसेर हाम्रो यति धेरै शाखाहरू छन् भनेर घमण्ड गर्छन् । तिनै सोझा अगुवा र गाउँका मण्डली देखाएर दाता बनाउँछन् । तर ती ठाउँका सेवाकाईहरूमा उनीहरूको कुनै सहभागिता नै हुँदैन।
हामी पुग्न खोजेको ठाउँ र त्यहाँसम्म पुग्न चालिने कदमहरूको मुल्यांकन त्यतिखेर गर्न सकिन्छ, जतिखेर हाम्रा प्रतिवद्दताहरूलाई कर्म र अभ्यासमा लगाएर आफैलाई हामी सफलताहरूको सिंडीमा हिंड्न दिन्छौं र त्यस सफलताको सम्पुर्ण श्रेय परमेश्वरलाई दिन्छौं । तर दुर्भाग्य; यहाँ त भक्ति, आराधना, विश्वास र परमेश्वरको इच्छालाई पनि बेचिएको छ ।
कस्तो दु:खलाग्दो कुरो आजको धेरै शहरिया मण्डली र इसाई नामबाट जोडिएको संघसंस्थामा ख्रीष्टियन शब्द छ तर प्रभु छैन । भूकम्पमा भत्किएको चर्च पुननिर्माणको लागि म केहि जिल्लाहरूमा पुगें ।देशबिदेशमा बस्ने नेपाली इसाईहरूले पठाउनुभएको रकमलाई बांडफांड गरेर अति आवश्यकतामा परेका मण्डलीहरूलाई थोरै थोरै गरेर हामीले सहायता गर्यौं ।त्यहाँ सहयोग पुर्याउन जानेक्रममा मैले त्यहाँका स्थानीय अगुवाहरूलाई भनें: “काठमाडौंमा थुप्रै इसाई संगठनहरू छन् मण्डली पुननिर्माणको निम्ति सहयोग जुटाउन पहल गर्नुहोस् ।” तर उनीहरूले निराश हुँदै भने, “त्यहाँबाट सहयोग पाउनका निम्ति हामी उनीहरूको छाताभित्र गएर गोलबन्द हुनुपर्छ ।” यस्ता कुराहरू सुनेपछि हामीभित्रको अदेखा पक्षपातपूर्ण व्यवस्था देखेर म अचम्मित भएँ ।
यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर म र मेरो टिमले अहिलेसम्म पनि मण्डलीहरूलाई सहयोग जुटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । हामी कुनै संघसंस्था होइनौं । व्यक्ति मात्र हौँ । कसैले हामीलाई बिश्वासको पुल ठानेमा त्यहाँ हिंड्न सहकार्य गरेका मात्र हौँ । हुन त भूकम्पमा भत्किएका मण्डली पुननिर्माणका लागि केहि सस्थांहरूमा दशौँ करोडौंको बजेट आएको छ । तर त्यो सबै पैसा मण्डलीहरूमा लगानी हुन्छ भन्ने झिनो आशा गर्न सक्ने ठाउँ पनि देखिदैन । यदि साँच्चै निस्वार्थ रूपमा त्यो पैसाहरू मण्डलीमा पुग्थ्यो भने नेपालभरिकै चर्चहरूलाई पक्कि घर बनाउन पुग्ने पैसा अहिले नेपालमा भित्रिएको छ । मैले भनिहालें शहरिया मण्डली र इसाई भनिएका संस्थाहरूमध्येका धेरैजसोमा ख्रीष्टियन शब्द छ; तर प्रभु छैन ।
हिजोमात्र क्रिश्चियन संस्था लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनले भूकम्पपीडितको नाममा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको समाचार बाहिर आयो । वास्तवमा त्यो संस्थाले नेपालमा कहिल्यै पनि आफुलाई ख्रीष्टियन संस्था भनेर स्वीकार गरेको छैन, राम्रो काम गर्दासम्म कहिल्यै पनि उसको नाम क्रिश्चियन शव्दसँग जोडिएन । तर वास्तवमा यो क्रिश्चियन संस्था नै हो । चर्चहरूमा उठेका भेटीले चलेको छ यो संस्था । हिजो मात्रै लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसनमा सम्पर्क गरेर वास्तविकता बुझ्न खोज्दा त्यहाँका मान्छेहरू यसबारेमा केहि बोल्न चाहेनन् ।
हाम्रै अगुवाहरूको संलग्नता रहेको ४ वटा जति संस्थामा भूकम्पमा भत्किएको घर र चर्च पुननिर्माणको लागि चालिस करोड जति पैसा आएको छ । तर यो संस्थाहरूले अहिले सम्म एउटा गोठ पनि बनाएको छैन । सबैले आफ्नै च्यानलको मान्छे, नातागोता खोज्छन । ५% काम गरेर दाताहरूलाई अरबौंको अडिट रिपोर्ट देखाउँछन् ।
हो; हाम्रो टाउकोमा दिमाग छ । हाम्रा खुट्टा हाम्रा जुत्ताभित्र नै छन् । यसकारण आफुले चाहेअनुसार कुनै पनि दिशामा हामी आफुलाई लैजान सक्छौं । हामी के जान्दछौं भन्ने हामीलाई थाहा छ । अनि हामीले नै कहाँ जाने भनेर निर्णय गर्दछौं । यसको मतलब तुवाँलो बनेर परमेश्वरको इच्छालाई मधुरो बनाउने अधिकार हामीमा छ भन्ने होईन । हाम्रो टाउकोमा दिमाग छ भन्नुको अर्थ परमेश्वरले कसैलाई दिन चाहेको भागलाई खोस्नु होईन । जुत्ता र खुट्टा छ भन्दैमा सत्यता र इमान्दारितालाई कुल्चनु पाइदैन । हामीमा परमेश्वरको डर छैन भने, हामी प्रभुविनाको ख्रीष्टियन भएनौं र ?
आजकल दिन चाहनेले पनि लिन जानेकोलाई मात्र दिदाँरहेछन् । तर लिन नजान्नेहरूका पक्षमा बोलिदिने/लेखिदिने यहाँ कोहि छैन । तर म ति मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु, जसले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि गनगन नगरिकन परमेश्वरको महिमा गर्न छोडेनन् ।
मैले माथि मादल, झ्याली, गाउँका पास्टरले पाउने तलव र समस्यामा परेका चर्चहरूको वर्तमान अवस्थालाई अलिकति चित्रण गरेको मात्र हुँ । वास्तवमा यो भन्दा ठुला आन्तरिक थुप्रै समस्याहरू आजका प्रभुविनाका अगुवा, मण्डली, संघसंस्थाहरूमा प्रशस्तै छन् । अब हामी यस्ता कुराहरूलाई लिएर चिडिनुहुँदैन । यो अन्त्यको समयको सुरुवाती दिनहरू हुन् । बरु हामी परिक्षामा नपरौं भनेर प्रार्थना गरौँ ।
गर्छु भनेर नगर्नेहरूलाई प्रभूको हातमा छोडिदिनुहोस् । तर हामीमा प्रेम, परमेश्वरको बचन रहेसम्म एकअर्कालाई उत्साह दिने कारण बनौँ । अरूले खाए, लुटे, थुपारे, के के गरे.. गरोस् । छोडीदिनुहोस् । तर हाम्रो सम्पर्कमा आउने प्रत्येकलाई सक्दो प्रेम गरौँ ।उनीहरूको निम्ति मुठ्ठी र हृदय खोलौं । हामीले जे गर्न सक्छौ त्यो गरौँ । अरूले हाम्रो लागि धेरै गरे त्यसको लागि धन्यवादी भएर, अब हामी हाम्रो लागि, हामी आफै गरौँ ।
तिमीहरूको सम्पत्ति बेचेर दान देओ । आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैलीहरू बनाओ । स्वर्गमा कहिल्यै नष्ट नहुने धन स्वर्गमा सञ्चय गर। त्यहाँ चोर आउँदैन र कीरा पनि लाग्दैन ।
२ कोरिन्थी ५:१
किनभने हामी जान्दछौं कि हामीले वास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाइएको होइन।
“ख्रीष्टियन” नाम जोडिएको त् छ, तर त्यहाँ ख्रीष्ट चाँहि हुनुहुन्न l Reviewed by Admin on Oct 06 . फेसबुकमा लेख्ने गरेका लेखाईहरूलाई अक्षरमा मात्र सिमित हुन नदिनका निम्ति मैले सक्दो प्रयास गर्दैछु । धरैपटक आफैलाई अभ्यासमा दौडाएको छु । यसकारण कहिले सुसमाचार लि फेसबुकमा लेख्ने गरेका लेखाईहरूलाई अक्षरमा मात्र सिमित हुन नदिनका निम्ति मैले सक्दो प्रयास गर्दैछु । धरैपटक आफैलाई अभ्यासमा दौडाएको छु । यसकारण कहिले सुसमाचार लि Rating: 0
धर्मनिरपेक्षविना “धार्मिक स्व...प्रार्थना यसरी गर्नु पर्छ !...